Cekmekoy-Sancaktepe-Sultanbeyli Subway Line | RayHaber | raillynews
HomeKhadka Isku-xirka ee Seksi-Sancaktepe-Sultanbeyli
İmamoğlu wuxuu ku dhawaaqayaa Gaadiidka iyo Maalgashiga Magaalooyinka 6da Bilood ee ugu Horreysa
Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul, ayaa yiri 16 Ujeedadeena kaliya ayaa ah inaan la xisaabtano 23 milyan, oo aan la wadaagno muddadii 6-da bilood ahayd ee ugu horreeysay kadib XNUMX Juun shacabka shir jaraaid. IMM iyo qaybteeda [More ...]
Nidaamka qiimeynta guryaha ee ku saleysan teknolojiyadda Indexa.com ayaa ku dhawaaqay qiimaha dib u soo celinta guryaha ee ku yaal xaafadaha Çekmeköy Metro Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Line, dhismaha kaas oo dib loo bilaabay oo la qorsheeyay in la furo rubuca ugu dambeeya ee 2022. Veysel Karani, [More ...]
Dhismaha wadada Çekmeköy Sultanbeyli Subway ayaa mar labaad bilaabatay; Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu dib u bilaabay Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Line, oo loo dhisay 2 sano. Emamoğu wuxuu carabka ku adkeeyay in adeeg kasta oo magaalada ka mid ah ay iska leedahay shacabka wuxuuna yiri: ücü Awooda Istanbul [More ...]
Heshiiska Makhaarta Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt
Mid ka mid ah siyaabaha lagu fahmo sida dadka aadka u xasaasiga ahi uga walaacsan yihiin “miisaaniyad-diidka, kaas oo ugu yaraan u ah sida cunsuriyada kale ee qaranka, iyo in loo hoggaansamo anshaxeedkiisa ayaa ah mid ka mid ah qaababka lagu fahmo hababka jihada. [More ...]
70 Km Metro wuxuu imanayaa Istanbul
Dawlada Hoose ee Magaalada Istanbul ayaa riixday badhanka loogu tala galay khadka cusub ee 70 kiiloomitir ee Istanbul. Xariiqda cusub ee kiiloo mitir ee 70, oo dabooleysa guud ahaan magaalada Istanbul, ayaa ku bilaaban doonta qandaraaska la qabanayo bisha 26. Waxa ay noqon doonto wadada safku [More ...]
IMM waxay gacan ka geysatay go'aankii joojinta ee loogu talagalay soo-saarayaasha mitrooga
Maalmihii ugu horreeyay ee 2018, Duqa Magaalada Magaalada Istanbul Mevlüt Uysal, oo ku dhawaaqay inuu kansal gareeyay qandaraaska qadka metro ee 6 si uu uga dhigo mid dhaqaale iyo dhaqso badan, ayaa hadda kansalay xariiqda metro ee 6. [More ...]
Qoondeynta cusub ayaa loo qoondeeyay mashaariicda la soo dejiyey ee magaalada Kadir Topbas, oo ah madaxii hore ee golaha degaanka ee magaalada Istanbul. 6 metro ayaa la siin doonaa bilyan Milyan TL. SözcüSida uu sheegayo Erdogan Suzer, Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul, [More ...]
Khadadka cusub ee mitrooga ee Istanbul
Iyada oo la raacayo qandaraaska 76,9 km ee xariiqda metro ee 6, oo uu ansixiyay Kadir Topbaş oo uu kansalay Madaxweynaha cusub ee Madaxweynaha IMM Mevlüt Uysal, si loo naqshadeeyo wadarta guud ee 60 km ee mashruuca xariiqda metro metro oo dhan Istanbul. [More ...]
CHP ayaa joojisay munaasabadii la joojiyay ee munaasabadda Agenda Parliament
Ku-xigeenka CHP Istanbul Sezgin Tanrıkulu ayaa u soo gudbiyay Hindise-cilmiyeed baarlamaaneed Golaha Shacbiga ee Turkiga sheegashada ah in khadadka Istaraatiijiyada Istanbul ay sababaan waxyeelo dadweyne. Soo-jeedinta Cilmi-baarista ee uu soo gudbiyey Tanrıkulu waa sidan soo socota; Duqii hore ee Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul [More ...]
IBB Jooji jidka Metro ee loogu talagalay Digniin!
Rugta TMIB ee injineeriyada macdanta ayaa ka digtay burburka khadka tareenka ee 6, kaas oo ay baajisay Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul. Injineerada macdan qodista ayaa tilmaamay in dhismaha ay ku bilaabeen dariiqooyin [More ...]
Tareenada hoos ku xusan ee Istanbul
Dawladda Hoose ee Magaalada Istambul (IMM) ayaa loo oggolaaday inay amaahato qadka metroga 6, oo la kireystay oo la bilaabay in la dhiso bilihii dhawaa. Golaha IMM waxay go’aansadeen inay u fidiyaan lacagtan amaahda dibadeed ee € 925 milyan iyo lacagta caymiska. [More ...]
IBB 6 waxay qaadan doontaa deyn shisheeye ah oo la siinayo khadadka metro
Dawladda Hoose ee Magaalada Istambul, oo si weyn uga qayb qaadatay dhibaatada taraafikada ee Istanbul iyada oo la adeegsanayo khadadka metrooga ee ay hirgalisay sanadihii ugu dambeeyay, ayaa qaaday tallaabo ku aaddan dhismaha khadadka metrooga cusub. Golaha Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul, 6 [More ...]